Notepad++ 6.0.0.0...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Notepad + + 6.0.0.0 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Computer အားလုံးမှာ ရှိကြပါတယ် ဒါပေမဲ့ လိုချင်တဲ့ သူတွေရှိရင် အဆင်ပြေအောင် တင်ပေးရတာပါ...! Notepad အကြောင်းကတော့ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော် ရှင်းမပြတော့ပါဘူး...!ဒီကောင်လေးကတော့ သူငယ်ချင်းတို့ စက်ထဲမှာ ရှိတာထက်တော့ နည်းနည်းလေးလန်နေတယ်...! အောက်မှာကျွန်တော် တင်ထားတဲ့ ပုံလေးအတိုင်းဆိုတာ ပြေားပါရစေ...! ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 5.41MB ရှိပါတယ်...!အောက်မှာ ကျွန်တော် Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
No Response to "Notepad++ 6.0.0.0...!"